Mareykanka oo sheegay in uu duqayn ku dilay in ka badan 100 maleeshiyo oo Al-Shabaab ah - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMareykanka oo sheegay in uu duqayn ku dilay in ka badan 100 maleeshiyo oo Al-Shabaab ah
November 22, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
Maleeshiyada Al-Shabaab. [Sawirka: AP]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Milatariga Mareykanka ayaa sheegay in ay weerar duqayn ah ku dileen in ka badan 100 maleeshiyo oo Al-Shabaab ah.
Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa bayaan ku sheegay in duqayntu shalay oo Talaado ahayd ay ka dhacday deegaan dhanka waqooyi-galbeed 210 km uga beegan caasimada Muqdisho.
Duqaynta ayaa dhacday iyadoo lala kaashanayo dowladda federaalka Soomaaliya, sida Mareykanku sheegay.
Wakaalada Wararka Soomaaliya ee SONNA ayaa shalay oo Talaado ahayd ku warantay in ku dhawaad 100 maleeshiyo oo Al-Shabaab katirsan la dilay kadib markii diyaaradaha Mareykanka iyo ciidamada kumaandooska Soomaaliya ay weerareen saldhigyo ay Al-Shabaab ku lahayd deegaanka Buur Eelaay ee gobolka Baay.
Afhayeenka howlgalada ciidamada Al-Shabaab Cabdicasiis Abu Muscab ayaa wakaalada wararka Reuters u sheegay in warkaas uu yahay dacaayad keliya.
Bilihii u dambeeyay, Mareykanka ayaa kordhiyay weeraradiisa duqaynta ah ee ka dhanka ah maleeshiyada Al-Shabaab ee ku sugan gudaha Soomaaliya, waxaana ku dhintay tobonaan dagaalyahan oo ay ku jiraan saraakiil.
September 29, 2017 Ugu yaraan 15 askari oo lagu dilay weerar ay Al-Shabaab ku qaaday saldhig ciidan oo ku dhow Muqdisho
Puntland iyo Itoobiya oo isku raacay adkaynta xiriirka ka dhaxeeya
Ohio-(Puntland Mirror) Ninkii geystay weerar ka dhacay Jaamacada gobolka Ohio ayaa la aqoonsaday in uu ahaa Soomaali, kaasoo arday ka ahaa jaamacada, sida ay sheegeen saraakiisha Mareykanka. Cabdirisaaq Cali Cartan oo 18-sanno jir ah ayaa [...]
Ganacsade hub ka iibin jiray maleeshiyada Al-Shabaab oo lagu xukumay sideed sanno oo xabsi ah
Muqdisho-(Puntland Mirror) Maxkamada ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa Cadow Cabdulle Axmed oo ahaa ganacsade hub ku xukuntay sideed sanno oo xabsi ah kadib markii lagu helay dambi ah in uu hub ka iibiiyay maleeshiyada Al-Shabaab. [...]